သံတွဲမြို့မဈေးကြီးဈေးအိမ်သာအားလမ်းဘေးမှရွေ့ဆောက်ပေးစေလို့.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သံတွဲမြို့မဈေးကြီးဈေးအိမ်သာအားလမ်းဘေးမှရွေ့ဆောက်ပေးစေလို့..
Posted by Nu Than on Jan 20, 2013 in Copy/Paste |4comments
ကို အဓိက says:
သံတွဲဈေးဆောက်နေတဲ့ပုံ၊ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကိုပေါ့။ ဘာမှနားမလည်ဘဲနဲ့တော့ရမ်းသမ်းမပြောစေချင်ဘူး
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မြေကြီးအုတ်တွေကိုမသုံးဘဲ ခေတ်နဲ့လျော်ညီတဲ့ဘိလပ်မြေအုတ်ကိုသုံးတာကိုနားမလည်တာ စိတ်မကောင်းဘူး။ ကိုယ်ဆိုင်ခန်းမရတာနဲ့ဘဲ ရတဲ့သူတွေကိုမကောင်းပြောတာကတော့ စပျစ်သီးကိုချဉ်တယ်လို့ပြောနေုသလိုပါပဲ၊ အဆောက်အဦးအမိုးတိုင်များကိုသုံးသောအလွိုင်းသံများမှာမီးဒါဏ်ကိုခံနိုင်ခြင်းမရှိဘဲမီးပြလိုက်သည်နှင့်ပြိုပျက်နိုင်တယ်ဆိုရအောင် သစ်သားနဲ့လုပ်ရင်ကော မီးလောင်ရင်မလောင်ဘဲနေနိုင်မှာလား၊ သစ်သားနဲ့ သံ ဘယ်ဟာမီးပိုလောင်နိုင်တယ်ဆိုတာ သူငယ်တန်းက ကလေးမေးရင်တောင်သိနိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါပဲဗျာ ကျွန်တော်တို့ ဒွါရာဝတီမြို့မဈေးက၀င်ရောက်လေ့လာခွင့်ပေးထားပါတယ် Welcome ပါပဲ။ လာရောက်ကြည့်ရှုပါလေ့လာပါ။ပြီးမှဝေဖန်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
tt ok says:
I have to say u that u are too much liar and too much low class .
I am not relative of any one u accused.
I really amazing that Mandalay gazette accept wrong news like this.
You don’t have any construction knowledge and real situation about our city.
Of course I hate also market committee like u but I love my Thandwe city.
U should careful your words and I know u are non educated man.
No one care about ur liar news.
Is there 500 lacks shop in my thandwe ?
No brain Mg Nu Than,,,,,,,
To develope myanmar , this is very dangerous people like Mg Nu Than who is non educate and publish wrong news .
Be careful my thandwe people